यौन सम्पर्कको अवधी कति समय हुनु उत्तम? अध्ययनले यसो भन्छ – Asal Kura
गृहपृष्ठ यौन सम्पर्कको अवधी कति समय हुनु उत्तम? अध्ययनले यसो भन्छ
यौन सम्पर्कको अवधी कति समय हुनु उत्तम? अध्ययनले यसो भन्छ
यौन क्रियाकलापको बारेमा धेरैका धेरैथरी मत छ । र, खासमा यो व्यक्तिको निजी मामिला पनि हो ।तर, यहि विषयलाई लिएर व्यक्तिले धेरै टाउको दुखाईरहेको पाइन्छ । कि खासमा शारीरिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गर्दा कति समयमा स्खलन हुनु सामान्य हो भनेर । नेपालमा यसको अनुसन्धान भइसकेको छैन तर पश्चिमा देशमा भने यौन क्रियाकलाप गरिरहेका पार्टनरबीचको सामान्य सेक्स अवधी छुट्याएको छ । अमेरिकी र क्यानेडियन यौन चिकित्सकहरुले गरेको अध्ययनले सामान्य अवस्थामा यौन क्रियाकलापमा लिप्त भएका पार्टनरबीच ३ देखि १३ मिनेटसम्ममा सन्तुष्टी पाइसक्ने छन् । अर्थात ३ देखि १३ मिनेटको बीचमा उनीहरु स्खलित भइसक्ने छन् ।
यो अध्ययनमा यौन चिकित्सक, मनोचिकित्सक, फिजिसियन, सामाजिक कार्यकर्ता, निजी चिकित्सक तथा नर्सहरु गरी ५० जनालाई सहभागी गराईएको थियो । जसले हजारौँ विरामीहरुलाई दशौँ बर्ष देखि हेरिरहेको छ । र उनीहरुको यौन क्रियाकलापबारे समेत बुझेको छ । उनीहरुका अनुसार समान्यत यौनसम्पर्क शुरु गरेको व्यक्ति ३ देखि ७ मिनेट भित्रै स्खलित हुनसक्छ । यो अवधीलाई उनीहरुले पर्याप्तता भनेका छन । त्यस्तै यौन सम्पर्क शुरु भएको ७ देखि १३ मिनेटसम्म टिक्नेलाई अत्यन्त आनन्ददायी सेक्स भनेका छन् ।
पछिल्लाे - आज थपिए ९०७० संक्रमित ५४ जनाको मृत्युु
अघिल्लाे - वरिष्ठ गायक/संगीतकार प्रधानको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार